မြန်မာပြည်သူတွေကို ကူညီမှုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အ​မေရိကန်နှင့် NUG အစိုးရတွေဆုံဆွေးနွေးခဲ့ – MC Tv Club
အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ဂျိုက်ဆူလီဗန်နှင့် မြန်မာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တို့၏ တွေ့ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် အီမလီဟွန်း၏ထုတ်ပြန်ချက်
အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ဂျိုက်ဆူလီဗန်သည် မြန်မာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့် ဒူးဝါးလရှီလ၊ ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့နှင့် ယနေ့အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးနေမှုကို မစ္စတာဆူလီဗန်က အထူးအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအတွက် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာစစ်တပ်၏ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မိကြောင်း မစ္စတာဆူလီဗန်ကပြောကြားခဲ့ပြီး အာဏာသိမ်းမှုအတွက် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည့်အကြောင်း မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မကြာသေးမီက ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ကိုဂျင်မီအဖမ်းခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မိကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းလွှတ်မြောက်ရေးနှင့် မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံး လွှတ်မြောက်ရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆက်လက်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသွားမည့်အကြောင်းကိုလည်း မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အနေဖြင့် ၎င်းတာဝန်ရှိသည့် သဘောတူညီချက်ငါးရပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရေး အာဆီယံ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ထောက်ခံအားပေးသည့်အကြောင်းကိုလည်း မစ္စတာဆူလီဗန်က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအခြေအနေနှင့် မြန်မာပြည်သူများအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများတိုက်ရိုက်ပေးအပ်နိုင်ရေး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေမှုအကြောင်းတို့ကိုလည်း
မစ္စတာဆူလီဗန်နှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတို့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ယခုကဲ့သို့လိုအပ်နေသောကာလအတွင်း မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆက်လက်အားပေးကူညီနေမည့်အကြောင်း
National Security Advisor Jake Sullivan met virtually today with Burmese NUG representatives Duwa Lashi La and Zin Mar Aung. Mr. Sullivan underscored continued U.S. support for the pro-democracy movement in Burma and they discussed ongoing efforts to restore Burma’s path to democracy. Mr. Sullivan expressed concern over the Burmese military’s brutal violence and noted that the U.S.
will continue to promote accountability for the coup. Mr. Sullivan also expressed concern over the recent arrest of pro-democracy activist Ko Jimmy and noted the U.S. will continue to advocate for his release and the release of all those unjustly detained.
They also discussed regional and international engagement, and Mr. Sullivan reiterated U.S. support for ASEAN efforts to hold the Burmese military regime to its obligations under the Five-Point Consensus.
Mr. Sullivan and the NUG officials discussed the COVID-19 pandemic in Burma and ongoing U.S. efforts to provide humanitarian assistance directly to the people of Burma. Mr. Sullivan underscored that the U.S. will continue to support the people of Burma in this moment of need.
Previous Article မင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတတ်ခွင့်မပေးသည့်အပေါ် အားရထောက်ခံကြောင်းမလေးရှားပြော
Next Article NUG အစိုးရရဲ့ အာဆီယံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီး ဦးဘိုလှတင့်ကို ခန့်အပ်